मुम्बईमा यस्तो हट अवतारमा देखीइन् कृ गिर्ल अदिती बुढाथोकी (तस्विरसहित )
काठमाडौँ । कृ चलचित्रबाट नेपाली रजतपट डेब्यू गरेकी नायिका अदिती वुढाथोकी यतिबेला भारतको मुम्बइमा रहेकी छिन् ।
भारतमा उनले नृत्य तथा अभिनय सम्बन्धी थुप्रै कुराहरु क्लास लिईरहेकी छन्। छिटै तमिल फिल्ममा डेब्यू गर्न लागिरहेकी अदिती सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा निकै सक्रिय छिन्। हालै मात्र उनले स्यूइमिङ्ग पुलमा खिचिएका दुई ओटा निकै हट तस्विरहरु इन्स्टामार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन्।
जहाँ उनी सेतो डु पिसमा निकै बोल्ड देखिएकी छिन्। सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा ४ लाख भन्दा बढी फ्लोअर्स भएकी अदितीले यस्तै हात तस्विरहरु पोस्ट गर्ने गर्छिन् र उनका तस्विरहरु निकै चर्चा पनि हुने गर्छ । थुप्रै भारतीय अनलाईन मिडियाहरुले उनलाई सन्नी लियोनी भन्दा पनि हट मोडल भनेर पनि समाचार प्रकाशन गरेका थिए।
उनले अहिले सम्म इन्सटामा ११२७ तस्विरहरु पोष्ट गरिसकेकी छन्। यस अघि उनलाई चलचित्र ‘कृ’ अनुबन्धित गर्दा चलचित्रका निर्माता र निर्देशकले पनि उनको इन्टाग्रामको तस्बिर हेरेरै मन पराएका थिए ।
प्रकाशित : बुधबार, जेठ ०९, २०७५१३:४९
सुन्दरता र अभिनयको मामिलामा बलिउडका अभिनेत्रीलाई कडा टक्कर दिन्छन यी पञ्जाबी अभिनेत्री
ब्लकबस्टर चलचित्र दिने यी चर्चित अभिनेत्री कता गायब ?
सपनाको संसार भन्दा कम रहेनछ दीपिका र रणवीरको विवाह हुने ठाउँ ! हर्नुहोस् तस्विरमा !
‘बत्ति गुल मिटर चालू’ को तेस्रो रोजाई शाहिद, पहिलो रोजाईमा थिए यी २ व्यक्ति!
शाहरुख-सैफको छोरा पनि फेल खान्छ बबी देओलको ह्यान्डसम छोरा अगाडी, पहिलो पटक आए मिडियामा